Imba yeVamiriri veUS inotumira tsamba kuNiantic yekushandisa kwemafoni data | IPhone nhau
Zvekare isu tinofanirwa kutaura nezve Pokémon GO uye mhedzisiro iyo kuuya kwemutambo uyu pamusika kuri kuve pakati pevashandisi. Nhau dzichangoburwa dzatave nemutambo uyu muUnited States dzinouya kwatiri kubva kuUnited States Imba yeVamiririri. Iyi kamera yakatumira tsamba kumusimudziri Niantic asi panguva ino haina hukama nekuvanzika, sezvazvinowanzoitika mune idzi kesi, asi inoenderana nekudyiwa kwedata rakagadzirwa nechishandiso.
Iyo Energy uye Commerce Committee yeImba yeVamiriri atumira tsamba kuna Niantic CEO John Hanke, kubvunza kana ivo vafungisisa chero nguva yekuvandudza kwekushandisa iko kudyiwa kwedata kwainoita panguva yekushanda kwayo. Tsamba iyi yatumirwa kuMumiriri weNew Jersey Frank Pallone, Diana DeGette anobva kuColorado, naJan Schakowsky vanobva kuIllinois. Mutsamba iyi, vezvematongerwo enyika vanobvunza mibvunzo mina ine chekuita nemhedzisiro yePokémon GO mutambo pane nharembozha.
Niantic yakashandisa zvakanakisa maitiro kudzikisa huwandu hwedata iyo Pokémon Go mutambo waunoshandisa kana uchiishandisa?
Niantic yakagadzira iko kunyorera nevasina waya vanopa masevhisi kuti vaone kuti vatengi havabatwe zvisingatarisirwi nekunyanyisa kushandisa data?
Nei Niantic isingazivise vashandisi vasati vatanga kutamba Pokémon Enda nezve huwandu hwedata ravanoshandisa?
Niantic ine nzira yekuyambira vashandisi kuti yavo yekushandisa dhata ingangove yakanyanya kukwirira, izvo zvinogona kutungamira kune kumwe kubhadharisa muyero yavo?
Mwedzi mumwe chetewo uye zvakadaro mukutarisira huwandu hwe data iro mutambo uyu ungadya, T-Mobile yakazivisa kuti inopa mapfumo madhata ekushandisa nePokémon GO chete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » IUnited States Imba yeVamiririri inotumira tsamba kuNiantic yekushandisa nharembozha